Ngaba Ukwamkela Ukuziphendukela Kwemvelo Kufuna Ukuba NoThixo?
Ukuguquka kwemvelo kunye noThixo
Enye into ebonakala ibangela abantu abaninzi ukuba bathambekele ekugatheni ukuziphendukela kwemvelo yiyo ngcamango, iqhutywe ngabantu abangundoqo kunye nabadala , ukuba ukuziphendukela kwemvelo kunye nokungakholelwa kuThixo kubandakanyeke kakhulu. Ngokutsho kwabagxeki, ukuvuma ukukholelwa kwemvelo kukukhokelela umntu ukuba akakholelwa kuThixo (kunye nezinto ezinxulumene nobukhomisi, ukuziphatha okubi, njl njl.). Nangona ezinye i-trolls ezikhathazayo abathi zifuna ukukhusela inzululwazi zithi abantu abangakholelwa kuThixo bafanele bathule ngaphandle kokuba banike ingcamango yokuba ukuziphendukela kwemvelo kuphikisana nobuxoki.
Ingxaki kukuba, akukho nanye kule nyaniso. Ngokuchasene noko abaninzi abagxekayo bathi, ukuziphendukela kwemvelo akukho nto ithetha ngayo ngemvelaphi yendalo yonke, ihlabathi, okanye ubomi ngokwawo. Ukuziphendukela kwemvelo kukuphathelele uphuhliso lobomi; umntu unokuvumela ukuziphendukela kwemvelo njengengcaciso ecacileyo yokwahlukana nokuphuhliswa kobomi eMhlabeni ngelixa ekholelwa ukuba uMhlaba kunye nobomi kuwo kwakuqale kubangelwa nguThixo.
Iinkqubo ezisetyenziselwa ukufika nokukhusela ezi zikhundla zombini ziphikisana, kodwa oku akuthethi ukuba iinkcukacha zezo zikhundla kufuneka ziphikisana. Ngenxa yoko, akukho sizathu sokuba umntu akakwazi ukuba yinkcubeko kwaye uyamkela inkolelo yokuziphendukela kwemvelo.
Ukuziphendukela Kwemvelo kunye neAtheism
Nangona ukuba ukuziphendukela kwemvelo kungabangela ukuba umntu angakholelwa kuThixo, ingabonakali ukuba umntu angakholelwa kuThixo ? Lo ngumbuzo onzima kunokuba uphendule. Enyanisweni, kubonakala kunobungqina obuncinci ukuba oku kunjalo - izigidi kunye nezigidi zabantu ehlabathini ziyamkela izinto eziphilayo, kuquka i-biologists ezininzi kunye ne-biologists ezibandakanyeka ngokuphandle kunye nophando malunga nokuziphendukela kwemvelo.
Oku kuphakamisa ukuba asikwazi ukugqiba ukuba ukwamkelwa kwemfundiso yokuziphendukela kwemvelo kubangela umntu ukuba angakholelwa kuThixo.
Oko akuthethi ukuba akukho ndawo efanelekileyo ephakanyisiwe apha. Nangona kuyinyani ukuba ukuziphendukela kwemvelo kungekhona kwimvelaphi yobomi, kwaye ngoko ke indlela ishiywe evulekileyo ukuba unkulunkulu ukuba acingelwe ukuba unoxanduva kuloo nto, inyaniso ihleli ukuba inkqubo yokuziphendukela kwemvelo ngokwayo ayihambelani neeninzi zeziganeko eziqhelekileyo kuThixo eNtshona.
Kutheni unkulunkulu wobuKristu, isiYuda okanye iSilamsi esenza abantu ngenkqubo efunwa ukufa, ukutshabalaliswa nokuhlupheka ngenxa yokuhamba kwekhulu leminyaka? Enyanisweni, sisiphi isizathu sokuba sicinge ukuba thina bantu siyinjongo yobomi kule planethi - sithatha kuphela inxalenye encinane yexesha apha. Ukuba ngaba-bebenokusebenzisa ixesha okanye ubungakanani kunye nomgangatho wokulinganisa, ezinye iifom zobomi zibaviwa abangcono kakhulu "injongo" yobomi bomhlaba; Ngapha koko, mhlawumbi "injongo" ayiyi kuza kwaye sinye isigaba esinye saloo ndleleni, ayikho enye okanye ingabalulekanga kunabanye.
Ngaloo ndlela ukuvuma ukuziphendukela kwemvelo kungabangela ukuba ukholelwa kuThixo okanye kwenzeni ukuba kukho ukukholelwa kuThixo, kukho ithuba lokuba ubuncinane bafune ukuhlaziywa kwento ecinga ngayo. Nabani na oqaphelayo kwaye uyamkela ukuziphendukela kwemvelo kufuneka acinge ngako ngokude kwaye kunzima ukwenzela ukuba kubangele umbuzo omkhulu kwizinto ezinokholo zenkolo kunye neenkolelo zabo. Iinkolelo ezinjalo azinakushiywa, kodwa azinako ukuqhubeka zingatshatanga.
Ubuncinane, oko kuya kuba yinto efanelekileyo ukuba abantu abazange bacinge nje ixesha elide kunye nobunzima ngesayensi, kodwa kubaluleke ngakumbi malunga nemfundiso yenzululwazi ineenkolelo zenkcubeko - inkolo, inzululwazi, ezentlalo, ezoqoqosho, njl.
Inyaniso edabukisayo kukuba, kukuba abantu bambalwa benza oku. Esikhundleni saloo nto, abaninzi abantu babonakala behlala nje: babenenkolelo malunga nesayensi kwenye indawo, iinkolelo malunga nenkolo kwelinye, kwaye aba babini bahlangane. Kwakunjalo nangeendlela: abantu bayamkela imigangatho yenzululwazi ngamabango emigangatho ngokuqhelekileyo, kodwa babambe amabango agqityiweyo malunga nenkolo kwindawo apho inzululwazi nemigangatho engasetyenziswa.
Yiyiphi ingqiqo yokuCinga? - Ingqondo evulekileyo
UHillary Clinton kwiNkolo kunye neCawa / Ukwahlukana koRhulumente
I-Palynology Isifundo seNzululwazi sePollen neSpores
Ngaba Amanxuwa Omlilo enza Ixabiso Lemoya Elibi?
Ihlabathi Lolonwabo ku-C ngeParpberry Pi
I-Reptile Imifanekiso neMifanekiso
Iigama Igama lokuthetha ngezemidlalo ngesiTaliyane
Yintoni Isicwangciso SikaThixo Sokusindiswa?
I-Magnetism ye-Science Fair Projects
Ukugwenxa Nokungabi Namahloni 'Ngobusuku bokugqibela behlabathi'
Iifayile ezisebenzayo ezilula
Hillary Clinton kwiingxaki
I-Joule kwi-Electron Volt Example Conversion